Home Wararka Wasiiro, Xildhibaano iyo Maamulka Gobalka Banaadir oo Kulan gaar ah ka yeeshay...
Wasiiro, Xildhibaano iyo Maamulka Gobalka Banaadir oo Kulan gaar ah ka yeeshay Amniga Muqdisho
Xarunta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar ayaa xalay waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay dardargelinta hawlgalada lagu xasilinayo amniga caasimadda Magaalada Muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiiro ka tirsan xukuumadda oo uu ugu horeeyo Wasiirka arrimaha gudaha, Xildhibaano, Guddoomiyaha gobolka Banaadir, Taliyeyaasha Ciidamada Booliska iyo Nabad Sugidda Soomaaliya, Saraakiil ciidan iyo xubno kale.
Inta uu kulanka socday ayaa waxaa aad looga hadlay sida ugu sahlan ee loo dardargelin karo sugidda amniga magaalada Muqdisho, iyada oo ay iskaashanayaan ciidamada amniga iyo shacabka.
Guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ammaanka ayaa bixiyay warbixino ku aadan sida lagu hormarin karo qorshayaasha lagu sugi karo ammaanka Magaalada Muqdisho.
“Shirka oo socday mudo saacado ah ayaa waxaa looga dooday sidii sida ugu dhaqsiyaha baan loogu bilaabi lahaa wajiga labaad ee hawlaha xasilinta caasimadda, maamulka gobolka wuxuu ka qaadanayaa wixii looga baahnaa, waxaan diyaar u nahay in la arko magaalada oo nabad ah, waxaan rajeyneynaa in wajiga labaad ee xasilinta marka uu bilowdo in magaalada si weyn looga dareei doono.” Ayuu yiri Xoghayaha guud ee gobolka Banaadir.
Shirkan ka dhacay Aqalka Dowladdda Hoose ee Xamar ayaa qeyb ka ah kulamo maalmihii dambe lagu qabanayay magaaladfa Muqdisho, waxaana looga hadlayay xoojinta amniga caasimadda.
Previous articleWararkii ugu Dambeeyay Shabaab oo Madaafiic ku Weeraray Ciidamada Kenya
Next articleAxmed Madobe oo u diray Farmaajo warqad uu kaga cabanayo 7 arrin (Aqri)
Maxay Qabanayaan Saraakiisha Ingiriiska ay Shalay Gaaray Konfur Galbeed
Cabsi Xoogan oo Laga Muujinaayo Soolaabashada Burcad Badeeda Soomaalida